သူပွောငျးလဲမလာရငျ ကိုယျပွောငျးလဲလိုကျပါ – Shinyoon
လူတဈယောကျ ပွောငျးလဲလာဖို့ဆိုတာ ကိုယျ့ဘကျက ပွောငျးလဲပေးခငျြစိတျရှိရုံတဈခုတညျးနဲ့ ဖွဈတာ မဟုတျပါဘူး ကိုယျပွောငျးလဲပေးခငျြတဲ့သူမှာလဲ သူ့ကိုယျသူ ပွောငျးလဲ ခငျြစိတျလေးရှိဦးမှ ပွောငျးလဲပေးလို့ ရတာပါ ။
လူတဈယောကျ ပွောငျးလဲဖို့အခြိနျဘယျလောကျကွာတတျလဲ ဆိုတဲ့မေးခှနျးတှလေဲ မေးဖို့မလိုပါဘူး လူတဈယောကျမှာ အခြိနျမွနျမွနျပွောငျးလဲ ပေးလို့ရတဲ့ အကငျြ့ဆိုတာ ရှိသလို ပွောငျးလဲပေးလို့မရတဲ့ ဗီဇဆိုတာလညျးရှိပါတယျ ။ တဈခါတဈလေ ကိုယျက ဗီဇကို အကငျြ့ကွီး မှတျပွီး ပွောငျးလဲဖို့ကွိုးစားရငျ အခြိနျတှေ ကုနျသှားတတျပါတယျ။ တကယျလို့ အခြိနျတနျလို့မှ သူ့ဘကျက ပွောငျးလဲ မလာရငျ ကိုယျ့ဘကျ စပွီးပွောငျးလဲလိုကျပါ ။
လူ …ကွိုးစားရငျ ဘာမဆိုဖွဈနိုငျပမေယျ့ ကိုယျ ကွိုးစားပွီး ပွုပွငျလို့မရတဲ့အရာတှေ အမြားကွီးရှိတာကို သဘောပေါကျပါ ။ တဈခါတဈရံ ကြှနျမတို့က သူသာ တကယျခဈြရငျ ပွောငျးလဲ ပေးမှာပါဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ အမှားတှကေို အထပျထပျအခါခါ ခှငျ့လှတျခဲ့ပမေယျ့ နောကျထပျ အမှားတှပေဲ ထပျရလာတာမြိုးလေ ။ မသိလို့ လုပျတာကိုက အမှားလို့ချေါပွီး သိသိနဲ့ မှားတာတှေ မြားလာတော့ ဆကျပွီး ခှငျ့လှတျနလေဲ ဆကျပွီး မှားနမှောပါပဲဆိုတဲ့ အတှေးပဲ ၀ငျလာတတျတယျလေ ။
တဈခါတဈလမှော ဖွဈစခေငျြလှနျးလို့အနောကျကတဈမြိုး ဘေးကတဈမြိုး အမြိုးမြိုး ကူညီဖေးမခဲ့ပမေယျ့ ကိုယျ့အရှမှေ့ာသာ လိမျမာသလိုလိုနပွေီး ကိုယျ့နောကျကှယျရောကျတာနဲ့ ထပျပွီးလုပျတာမြိုးကတြော့ ခှေးမွီးကောကျကို ကညျြတောကျ စှပျနသေလိုပါပဲ ဘယျလောကျပဲ ဖွောငျ့အောငျလုပျလုပျ အခြိနျတနျ ပွနျကောကျသှားတာပဲလေ ။
ကိုယျ ပွောငျးလဲပေးဖို့ကွိုးစားရငျ ပငျပနျးလာတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ ပွုပွုပွငျပေးဖို့ကွိုးစားရငျး အခြိနျတှေ ကွာညောငျးလာတဲ့အခါ . . . သူ့ဘကျက ဘာတဈခုမှ မပွောငျးလဲ လာရငျ ကိုယျ့ဘကျက ပွောငျးလဲဖို့သငျ့ပွီလို့နားလညျသဘောပေါကျလိုကျဖို့သငျ့ပွီလေ ။ ဒါ ငါ ပွောငျးလဲပေးလို့မရပါလားဆိုတဲ့အသိလေး ရသငျ့ပွီ ။ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ အမြားကွီးထပျပွီး ထားနတေော့မယျ့အစား လဈြလြူရှုတတျဖို့ကွိုးစားလိုကျတာက ပိုပွီး မှနျမယျလို့ထငျပါတယျ ။
လူတဈယောကျရဲ့ ဗီဇကို ပွုပွငျဖို့ကွိုးစားရငျ အခြိနျကုနျမခံပါနဲ့ လူတဈယောကျရဲ့ ဗီဇဆိုတာ သမှေ ပြောကျတာမြိုးလေ ။ ကိုယျကွိုးစားပွီး ပွောငျးလဲ ပေးခဲ့သားနဲ့ တဈဖကျက ဘာတဈခုမှ မပွုပွငျလာတဲ့ ကိုယျ့ဘကျ ဆငျခွငျလိုကျတာ ပိုကောငျးပါတယျ ။
သူပြောင်းလဲမလာရင် ကိုယ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ ။
လူတစ်ယောက် ပြောင်းလဲလာဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်ဘက်က ပြောင်းလဲပေးချင်စိတ်ရှိရုံတစ်ခုတည်းနဲ့ ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်ပြောင်းလဲပေးချင်တဲ့သူမှာလဲ သူ့ကိုယ်သူ ပြောင်းလဲ ချင်စိတ်လေးရှိဦးမှ ပြောင်းလဲပေးလို့ ရတာပါ ။
လူတစ်ယောက် ပြောင်းလဲဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာတတ်လဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလဲ မေးဖို့မလိုပါဘူး လူတစ်ယောက်မှာ အချိန်မြန်မြန်ပြောင်းလဲ ပေးလို့ရတဲ့ အကျင့်ဆိုတာ ရှိသလို ပြောင်းလဲပေးလို့မရတဲ့ ဗီဇဆိုတာလည်းရှိပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်က ဗီဇကို အကျင့်ကြီး မှတ်ပြီး ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားရင် အချိန်တွေ ကုန်သွားတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အချိန်တန်လို့မှ သူ့ဘက်က ပြောင်းလဲ မလာရင် ကိုယ့်ဘက် စပြီးပြောင်းလဲလိုက်ပါ ။
လူ …ကြိုးစားရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ် ကြိုးစားပြီး ပြုပြင်လို့မရတဲ့အရာတွေ အများကြီးရှိတာကို သဘောပေါက်ပါ ။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်မတို့က သူသာ တကယ်ချစ်ရင် ပြောင်းလဲ ပေးမှာပါဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အမှားတွေကို အထပ်ထပ်အခါခါ ခွင့်လွှတ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ထပ် အမှားတွေပဲ ထပ်ရလာတာမျိုးလေ ။ မသိလို့ လုပ်တာကိုက အမှားလို့ခေါ်ပြီး သိသိနဲ့ မှားတာတွေ များလာတော့ ဆက်ပြီး ခွင့်လွှတ်နေလဲ ဆက်ပြီး မှားနေမှာပါပဲဆိုတဲ့ အတွေးပဲ ၀င်လာတတ်တယ်လေ ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ဖြစ်စေချင်လွန်းလို့အနောက်ကတစ်မျိုး ဘေးကတစ်မျိုး အမျိုးမျိုး ကူညီဖေးမခဲ့ပေမယ့် ကိုယ့်အရှေ့မှာသာ လိမ်မာသလိုလိုနေပြီး ကိုယ့်နောက်ကွယ်ရောက်တာနဲ့ ထပ်ပြီးလုပ်တာမျိုးကျတော့ ခွေးမြီးကောက်ကို ကျည်တောက် စွပ်နေသလိုပါပဲ ဘယ်လောက်ပဲ ဖြောင့်အောင်လုပ်လုပ် အချိန်တန် ပြန်ကောက်သွားတာပဲလေ ။
ကိုယ် ပြောင်းလဲပေးဖို့ကြိုးစားရင် ပင်ပန်းလာတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ် ပြုပြုပြင်ပေးဖို့ကြိုးစားရင်း အချိန်တွေ ကြာညောင်းလာတဲ့အခါ . . . သူ့ဘက်က ဘာတစ်ခုမှ မပြောင်းလဲ လာရင် ကိုယ့်ဘက်က ပြောင်းလဲဖို့သင့်ပြီလို့နားလည်သဘောပေါက်လိုက်ဖို့သင့်ပြီလေ ။ ဒါ ငါ ပြောင်းလဲပေးလို့မရပါလားဆိုတဲ့အသိလေး ရသင့်ပြီ ။ မျှော်လင့်ချက်တွေ အများကြီးထပ်ပြီး ထားနေတော့မယ့်အစား လျစ်လျူရှုတတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တာက ပိုပြီး မှန်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဇကို ပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားရင် အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဇဆိုတာ သေမှ ပျောက်တာမျိုးလေ ။ ကိုယ်ကြိုးစားပြီး ပြောင်းလဲ ပေးခဲ့သားနဲ့ တစ်ဖက်က ဘာတစ်ခုမှ မပြုပြင်လာတဲ့ ကိုယ့်ဘက် ဆင်ခြင်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ် ။